FIVORIAN’NY TIM/RMDM : Tsy maintsy hanongam-panjakana ny 7 febroary 2021? – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:13
Tsy misy afatsy famotehana firenena no ao an-tsain'ny mpanohitra.
Accueil/Politika/FIVORIAN’NY TIM/RMDM : Tsy maintsy hanongam-panjakana ny 7 febroary 2021?
FIVORIAN’NY TIM/RMDM : Tsy maintsy hanongam-panjakana ny 7 febroary 2021?
“Ny hisiana ra mandriaka”. Io no baikom-pitolomana efa aelin’ireo mpanetsiketsika ao amin’ny TIM/RMDM ankehitriny. Ny handrodana ny Fitondrana ankehitriny kosa no tanjona. Ary ny fitsangatsanganana ny 6 febroary 2021 izao no atao hisintonana ny olona.
Lucien R. 27 janvier 2021
Efa ho andro maromaro izao no fantatra fa mivory tsy tapaka ny ekipan’ny TIM sy ny RMDM. Fanomanana hetsika amin’ny 6 febroary izao no lahadinika. Raha ny fanentanana efa mandeha amin’ireo onjam-peo akaiky azy ireo, dia fitsangatsanganana no ambara fa ho atao amin’io andron’ny 6 febroary io. Hisy ny fizarana nofon-kena mitam-pihavanana raha ny fanentanana ihany, ka Ravalomanana Marc no hanolotra ny omby izay ho zaraina. Dimy no isan’ireo omby ireo, raha ny fantatra. Hatreto, olona 1.000 no voalaza fa efa nisoratra anarana. Ankoatra ireo, fantatra koa fa manentana ny mponina ao aminy ireo ben’ny tanàna TIM mba hanatrika izany hetsika izany. Hisy mihitsy, raha ny vaovao mivoaka avy amin’ny ireo fivoriana fanomanana ireo, ny fiara lehibe hitaomana ireo olona ireo.
Ny tena marina anefa dia zavatra hafa no tena kendren’ny ekipan-dRavalomanana amin’io hetsika io. Fanjonona olona hanaraka azy ireo fotsiny ihany ny hoe “fitsangatsanganana” sy “fizarana nofon-kena mitam-piadiana”. Raha ny vaovao mari-pototra voaangona, nivoaka avy amin’ireo fivoriana sesilany ataon’ny TIM/RMDM ireo, dia ny “handrangitra ny Fanjakana” no tanjona mba hisian’ny “fifandonana amin’ny mpitandro filaminana”. Ahafahana manao izany dia fantatra fa toerana akaiky ny “centre ville” no hikarakaran’izy ireo io hetsika amin’ny 6 febroary io na dia inian’izy ireo tsy ambara mivantana aza. “Tsy haka alalana” mihitsy ihany koa, raha ny vaovao voaangona ihany. Ny andrasan’izy ireo amin’izany dia ny handefasan’ny Fitondram-panjakana mpitandro filaminana handrava ny hetsika. Ka rehefa mandrava ny mpitandro filaminana dia eo no hanararaotana hitadiavana fifandonana. Tanjona hoy ireo mpitarika ireo fivoriana ireo ny “hisian’ny olona maratra na maty mihitsy aza”.
“Anatin’ny tetika ny hitarika ireo olona voaangona ho eny amin’ny 13 mai”, raha ny resaka nivoaka avy amin’ireo fivoriana ireo, izay nanome toromarika ny amin’ny hanaovana fitokonana fanoherana ny Fitondrana ankehitriny, ny fandrobana ireo tranombarotra manodidina an’Analakely, Behoririka, ary Soarano. Ny alatsinainy teo, raha ny vaovao voaangona ihany, dia nazava mihitsy ny baikom-pitolomana avy amin’i Fidèle Razara Piera. “Tsy maintsy hisy maratra sy maty ary voaroba fananana amin’io” hoy ity tompon’andraikitry ny seraseran’ny antoko TIM ity nandritra izany fivoriana izany raha vaovao nivoaka avy amin’izany fivoriana izany. “Tsy maninona izany” hoy izy “satria izay no tolona ahafahana maka fahefana.” Ny tanjona raha ny fantatra dia ny hisiana korontana eto Antananarivo ny 6 febroary 2021, ka hisiana miaramila hikomy hanongam-panjakana ny alin’ny 6 febroary hifoha 7 febroary ho avy izao.
Efa hatramin’ny fiandohan’ity taona ity raha tsiahivina no nihetsiketsehan-dRavalomanana sy ny ekipany. Nandritry ny fifampiarahaban’izy ireo noho ny taom-baovao no efa nanome baiko ny mpanara-dia azy Ravalomanana fa tsy maintsy mihetsika. Tsy ela taorian’izay dia niverina ny fanandramana baomba vita tanana, naparitaka teny amin’ireo mpianatry ny anjerimanontolo koa ny vola hanetsiketsehana azy ireo saingy nitsefotra. Ny teny amin’ny ENS raha tsiahivina no nanomboka azy. Avy eo nitohy tamin’ny fanetsiketsehana ireo mpianatra ho mpitsabo. Fantatra koa fa efa kitikitihan’izy ireo ny mpampianatra Fram mba hihetsika. Izao indray, dia tsy mitsahatra mamafy lainga amin’ny onjam-peo ny olon’ny TIM/RMDM, mandranitra adim-poko, ary mivohy fifankahalana eo amin’ny samy Malagasy. Izany rehetra izany dia tsy mikendry afa-tsy ny hisakanana ny Fitondrana Rajoelina amin’ny asa fampandrosoana hataony, hanakorontanana ny firenena ary indrindra indrindra ny handrombahana amin-kery ny fahefana.
FIDIOVANA: Sekoly maherin’ny 19 000 hisitraka fitaovana fanasana tanana
KAOMININA ANTANANARIVO RENIVOHITRA: Mpanolotsaina monisipaly miisa 10 nangatahan’ny Prefe hoesorina
ORINASA JIRAMA: « Hatsarao aloha ny tolotra, vao mampiakatra faktiora”, hoy ny Filoha
ANKAZOBE : 85% ny taham-pahombiazan’ny fambolen-kazo